Latest News | Myanmar Seed Information Portal
Second National Seed Sector Platform Meeting
The second National Seed Sector Platform Meeting was hold at Thingha hotel, Naypyitaw on9November, 2017 with the support of Inuputs Reform Project-World Bank. The 55 participants from public sector, private sector and development partners were attended the meeting. The preliminary findings and proposals of Myanmar Seed Regulatory Review was presented by U Tin Htut Oo, CEO of Agribusiness and Rural Development Consultants (ARDC). The proposals were intensively discussed during breakout session of the meeting.
Read more about Second National Seed Sector Platform Meeting
Calling for application of variety recognition certificate to 16th Technical Seed Committee
Read more about Notification for application on variety recognition certificate
With support of Integrated Seed Sector Development Programme, training on Early Generation Seed (EGS) production technology and seed quality control was conducted from 20 to 23 February 2018. The purpose of training is to enhance capacity of seed farms' staff and seed research farms' staff with seed production and seed quality control. The training mainly focus on EGS of sunflower and pigeon pea crops and to enrich the staff with seed production technology and quality control of those crops.
Read more about Training course on EGS Production Technology and Seed Quality Control was conducted on 20 February, 2018.
The Seed Sector Platform Secretariat was developed to organize National Seed Sector Platform Meeting biannually which was agreed in Myanmar Seed Sector Roadmap. The platform secretariat was approved by Director General of Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation in October 2017. It involves2private sector,3public sector,3development partners and 1 Regional Seed Grower Association. First seed sector platform secretariat meeting was hold on 13 February at Director's office of Seed Division, Yangon.
Read more about First Seed Sector Platform Secretariat Meeting
ပြည်တွင်းထွက် ဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့် သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း(TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူသည် ယနေ့နံနက် (၈:၃၀)အချိနတွင် ကျင်းပသော အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ပြည်တွင်းထွက် ဆန်၊ ပဲ၊ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့် သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း (TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် အမှာစကား
Read more about ပြည်တွင်းထွက် ဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့် သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း(TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး (Technical Expert Review Meeting)အား၂၇.၁၀.၂၀၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၀၀နာရီအချိန်တွင်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၆)၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် GIZ မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ယွန်းပညာကောလိပ်(ပုဂံ)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ယွန်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဆောင်းဒါးရက်
Read more about Technical Expert Review Meeting ကျင်းပ
တောင်သူလယ်သမားများ အတွက် "စက်မှုလယ်ယာ" Mobile Application ထွက်ရှိ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနသည် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်
ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက်များကို Online မှ အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ရန်အတွက် Android Mobile Application တစ်ခုဖြစ်သည့် "စက်မှုလယ်ယာ" App
ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ရာ ယခုအခါ Google Play Store တွင် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Application တွင် ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ-
Read more about တောင်သူလယ်သမားများ အတွက် "စက်မှုလယ်ယာ" Mobile Application ထွက်ရှိ
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ (World Food Day)
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ (World Food Day) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၌ ( ၁၆ - ၁၀ - ၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာအဆိုပါအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ FAO နှင့် NGO/INGO များမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထန်း၊အုန်း၊ သရက်၊ ခရမ်းချဉ်သီးများ ဖြင့်ပြု
Read more about ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနေ့ (World Food Day)